Hooyada dhashey Askari Maraykan ah oo lagu dilay Weerarkii Manda Bay oo hadashay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Hooyada dhashey Askari Maraykan ah oo lagu dilay Weerarkii Manda Bay oo hadashay.
On Jan 7, 2020 785 0
Hooyada dhashay askari Maraykan ah oo ku dhintey weerarkii ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen saldhig milatari oo ku yaal dalka Kenya ayaa kula talisay wiilkeeda inuusan tegin Soomaaliya iyadoo uga baqeysay in lagu dilo.
Henry Mayfield oo 23 jir ah kana soo jeedo magaalada Chicago ayaa ka mid noqday 17 askari oo Maraykan ah kuwaas oo lagu dilay weerarkii aroor hore ee Axadii lasoo dhaafay lagu qaaday saldhigga ciidamada Maraykanka ee Manda Bay.
“Waa uu jeclaa qoyskiisa waxaana uu la qaatay waqtiyo wanaagsan,”ayay tiri hooyada dhashay Mayfield oo u warameysay tvga NBC ee wadanka Maraykanka.
Waxay intaas sii raacisay “Markii iigu dambeysay ee aan la hadlay wiilkeyga waxa ay ahayd maalintii ugu horeysay ee sanadkan cusub.” Taas oo ahayd maalmihii ay Kirishtaanku u dabaal degayeen sanadka cusub ee miilaadiga.
Hooyadan ayaa sheegtay inay wiilkeeda kula talisay inuusan tegin Soomaaliya,balse u sheegay in halka uu joogo ay tahay meel ammaan ah. Mayfield ayaa ku biirey ciidanka bishii June 2018 sida uu baahiyay NBC.
Aroornimadii hore ee Axaddii ayay ahayd markii nafood huriyaal katirsan guutada Istish-haadiyiinta Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhiga Masimba oo ay deganyihiin ciidamo Maraykan iyo Kenyaati ah, kaas oo lagu dialy 17 askari Maraykan ah, iyo 9 Kenyaati ah, halka sidoo kale lagu burburiyay 7 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo shan gaari oo gaashaman.
Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Axmed Cumar Abuu Cubeyda ayaa kalimadii ugu dambeysay ee uu jeediyay, ciwaankana looga dhigay Alle mooye cid kale uma rukuuceyno, wuxuu si adag ugu digtay Maraykanka iyo muwaadiniintiisa, isagoona sheegay in Maraykanku dhegaha ka fureystya digniinaha Mujaahidiinta, maantana uu qoomamo taaganyahay.